ဘယ်အချိန်မှာ Mallorca ကိုသွားပိုကောင်းသလဲ | ခရီးသွားသတင်း
မော်နီကာဆန် | | အကြံပေးချက်များ, ခရီးသွားနေရာများ, Palma de Mallorca
မြို့တော် Palma ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။
Mallorca သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများဆုံးတိုးတက်သောစပိန်ကျွန်းစုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာသီတစ်ခုချင်းစီ၌ဟိုတယ်လူနေမှုနှုန်းသည် ၁၀၀% အထိရောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ လူအများအပြားလာရောက်လိုသော (ငါဒီမှာနေထိုင်သည်🙂) လမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေများ၌တစ်ရက်လုံးကုန်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများအတွက်အနည်းငယ် sightseeing ။
သို့သော် Mallorca ကိုသွားခြင်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ပိုကောင်းသည်ကိုသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောမြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတုကိုခံစားနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်တစ်နှစ်၏မည်သည့်အချိန်၌မဆိုအကျဆုံးခံစားနိုင်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒီတော့ သင်၏လက်မှတ်များမည်သည့်အချိန်တွင်စာရင်းသွင်းမည်ကိုသင်သေချာမသိပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင့်အားပေးသောအကြံဥာဏ်ကိုသတိပြုပါ။
1 Mallorca ၏အကျဉ်းချုပ်သမိုင်း
2.1 Mallorca တွင်ရာသီဥတုက
2.2 Mallorca သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးလများ
3 Mallorca ကိုဘယ်အချိန်သွားရမလဲ? ကျနော့်အမြင်
Sob Salines ရှိ Poblat dels Antigors, // Image - Wikimedia / Olaf Tausch
မင်းတစ်ခါမှမဖူးဖူးဖူးတဲ့ဘယ်နေရာကိုမသွားခင်၊ မင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားပါသလား။ အမှန်တရားကတော့ခရီးမသွားခင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ငါကကြိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအဲဒီနေရာရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပိုနားလည်စေတယ်။ Mallorca ၏ဖြစ်ရပ်တွင်၎င်းသည်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန့်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဂ။ ဤအစောပိုင်းလူသားများသည် Talaiots ဟုခေါ်သောကြီးမားသောထုံးကျောက်ထည်ရှိသောအိမ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ရှေးဟောင်းလူသားအခြေချနေထိုင်ရာနေရာများသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည် Poblat dels Antigors, Ses Salines မြို့တွင်ရှိသည် (ကျွန်း၏တောင်ဘက်), ses Païsesသည်ကျွန်း၏အရှေ့မြောက်ဘက်Artàတွင်တည်ရှိပြီး Llucmajor ရှိ (Capocorb Vell) (အနောက်မြောက်ဘက်သို့ Palma မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကားဖြင့်) ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်လို့ရောမတွေရောက်ရှိလာတဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာလည်းတည်ရှိပြီး၊ Majorca ရဲ့ "စစ်မှန်သောသမိုင်း" ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်ကရောမ Pollentia (ဒီနေ့Alcúdia) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအောင်ပွဲများစတင်ပြီးမကြာမီတွင်၊ ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာနှင့်ထို့နောက်အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၂၂၉ ဘုရင် Jaume ငါကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးသည်အထိမွတ်စ်လင်မ်များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဤတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်၎င်းနှင့်သူသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ကက်တလန်နှင့်အခြားစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Castell de Bellver // ဓာတ်ပုံ - Wikimedia / Lanoel
သူ့သား Jaume II ကသူ့နေရာတွင်ဆက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် Cagon of Cagon နှင့်ဆက်ဆံရေးအေးခဲလာသောအခါသူ့အတွက်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ သူ့နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း Palma ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Bellver Castle သို့မဟုတ် Almudaina နန်းတော်များကိုအခြားသူများအကြားတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယနေ့ထိကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
၁၃၄၃ ခုနှစ်တွင် Mallorca ကို Pedro IV ကအခမ်းအနားကိုကျူးကျော်ခဲ့သည်။ Majorcans သည် Jaume III မှထွက်ခွာသွားပြီး Llucmajor စစ်ပွဲတွင်သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်းသည်အာရဂွန်သရဖူ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပြီးကက်သလစ်Monကရာဇ်များလက်ထပ်ပြီးနောက် Castile ၏သရဖူဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုစစ်ပွဲ (၁၈ ရာစု) အပြီး၊ Nueva Planta အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ကျွန်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ယခုမှစ။ Mallorca နှင့် Mallorcan လူမျိုးတို့၏သမိုင်းသည်စပိန်နှင့်တူညီသည်။
အရာအားလုံးရှိလင့်ကစားကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ Mallorca သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ စန္ဒယားပညာရှင် Chopin (သို့မဟုတ်) ကဗျာဆရာ George Sand ကဲ့သို့သောအနုပညာရှင်များစွာရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့မနေ့ကကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နှလုံးသားထဲကတောင်းဆိုသမျှသည်ပန်းချီကားများ၊ ကဗျာများ၊ ဝတ္ထုများ၊ ပန်းပုများဖြစ်စေဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲရာသီဥတုက \_ t နူးညံ့တယ်နွေရာသီ မှလွဲ၍ အချို့နေ့ရက်များတွင်အပူချိန် (၃၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (သြဂုတ်လ / စက်တင်ဘာလ) သို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမဆိုးပါဘူး စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ကမ်းခြေ၊ ရေကူးကန်တွင်သို့မဟုတ်ကျွန်းတစ်လျှောက်ရှိမရေမတွက်နိုင်သောလှေခါးထစ်များထဲမှတစ်ခု၏အရိပ်အောက်တွင်လွတ်လပ်စွာအချိန်ဖြုန်းရန်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုပေးဖို့မြို့တော်ရဲ့ရာသီဥတုဇယားကိုကြည့်ပါ။
ပုံ - en.climate-data.org
ဒါ့အပြင်သင်သိသင့်ပါတယ် တစ်နှစ်လျှင်ရက်ပေါင်း ၁၁၀ ကျော်နေရောင်ခြည်ရှိသည်, နှင့်ပျမ်းမျှအပူချိန်မြင့်မားသော (နိမ့်ဆုံး14ºCနှင့်အမြင့်ဆုံး22ºC) မြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုး၊ ဒီဟာကမီးမောင်းထိုးပြထားတာထက်ပြaနာပိုများပေမယ့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နှစ်ကို ၅၃ ရက်ခန့်မိုးရွာသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်တစ်နှစ်လျှင်အလင်း ၂၇၇၀ နာရီကျော်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် (နှင့်ဇန်နဝါရီလတွင်ပင်ဆောင်းရာသီမည်သို့မည်ပုံပေါ် မူတည်၍) အပွင့်ပွင့်လျက်ရှိကြ၏။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်းဌာနေမဟုတ်သော်လည်းသစ်ပင်များသည်သဘာဝအလျောက်ပေါက်ဖွားလာသည့်သစ်ပင်များဖြစ်သည်။ နွေ ဦး မရောက်မီသူတို့သည်အလွန်အေးရန်မလိုအပ်သကဲ့သို့သူတို့သည်လှပလာကြသည်။
အပူချိန်ဟာအေးခဲပြီးပျမ်းမျှ ၁၄ºC ရှိပေမယ့်သာယာသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်ခြင်းကဲ့သို့သောအားကစားများကိုအများဆုံးနှစ်သက်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်ဘီးစီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကကျွန်းတစ်လျှောက်စက်ဘီးစီးသူများသွားလေ့ရှိသည့် (များသောအားဖြင့်ဇန်နဝါရီလကုန်နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းအကြား) Challenge ရင်ခွင်၌ပျော်မွေ့နိုင်သည်။
ဒီနှစ်လအတွက်ကောင်းတဲ့အရာကလူနည်းနည်းပဲရှိလို့စိတ်ငြိမ်သက်မှုရှိတဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုသွားနိုင်ပါတယ်။ အအေး / အေးဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီရှည်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ မင်းတို့ The Great Carnival မှာသူတို့ Palma မှာလုပ်မယ့်အချိန်အများကြီးရှိမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် (အခြားမြို့များတွင်လည်းကျင်းပနိုင်သော်လည်းသိပ်မထူးခြားလှပါ။ ) (ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှmidပြီလလယ်အထိကြာသော) Fira del Ram တွင်ဖြစ်သည်။
ကလပ်Nàutic de Sa Ràpita, Mallorca ။ // ရုပ်ပုံ - ဝီကီမီဒီယာ / ??????? ??????????
ဒီနှစ်လကိုငါကသူတို့ကို "Mallorca ရဲ့သက်သာခြင်း" လို့ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၁၅-၁၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်, အမြင့်ဆုံး20ºCထက်ပိုသောအရှိန်နှင့်အတူ။ ညအချိန်တွင်မင်းသည်ရှည်လျားသောလက်တစ်ချောင်းလိုအပ်သေးသည်။ တစ် ဦး ကသိပ်အထူမပါသော cardigan ကောင်းပါတယ်။
သန့်ရှင်းသောရက်သတ္တပတ်ကိုကျင်းပသည့်အချိန်သည်ပြီလသည်ဘာသာရေးလဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ငါသည် Palma ရှိအခြားမြို့များသို့သွားရန် ပို၍ သင့်ကိုအကြံပေးသည်။ ယနေ့ခေတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့်အချိုရည်ဆိုင်များတွင် empanadas များကိုရောင်းချသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည် ကျားသိုးသငယ်၏အသားနှင့်ပြည့်သောအီစတာ၏) ။
သို့သော်အနည်းငယ်စားပြီးနောက်သင်ပါတီပွဲလုပ်လိုလျှင်၊ သငျသညျ၏အားသာချက်ယူ။ ကမ်းခြေကလပ်, ဒါမှမဟုတ် La Palma အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှေပြပွဲကကျင်းပဖွင့်ပွဲများသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် Fira de Maig သည်အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည့် Ses Salines တွင်ကျင်းပသော Fira de Maig ကိုကျင်းပသည့် အချိန်မှစ၍ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင်သင်၏ပြက္ခဒိန်၌သင်မှတ်သားရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်မမေ့နိုင်သောနေ့တစ်နေ့သို့မဟုတ်အမှတ်တရလက်ဆောင်ဝယ်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်သူများစွာကိုကြိုဆိုသည်။ အဲဒီမှာငျးကုမဆို၌တည်၏။
Cache of Drach // Image - Wikimedia / Lolagt
ဇွန်လနှင့်အတူကျနော်တို့ Mallorca နှင့်၎င်း၏ခရီးသွား for ည့်များအတွက်ယခုနှစ်အကြိုက်ဆုံးရာသီဖြစ်သည့် ... ငါအမြဲပြောလိမ့်မယ်။ Mallorcan နွေရာသီသည်ကမ်းခြေ၊ ကလပ်၊ လှေကားထစ်များ၊ လန်းဆန်းစေသောအချိုရည်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၁၈ မှ ၂၀ ဒီဂရီခန့်ရှိသည်ထို့ကြောင့်လက်တိုတိုအင်္ကျီများ၊ ၀ တ်စုံများ၊ စကတ်များနှင့်ဘောင်းဘီတိုများသည် ၀ တ်ဆင်ရန်လွယ်ကူစွာထားနိုင်သောအဝတ်အစားများဖြစ်သည်။
ဒီလနဲ့ဇူလိုင်လထက်ဇွန်လမှာပိုပြီးအကြံပေးလိုပါတယ် မြို့လမ်းများသို့မဟုတ်မြို့များသို့လမ်းလျှောက်ပါ။ Drach of Caves သို့သွားပါ (Porto Cristo တွင်) သို့မဟုတ် Colonia de Sant Jordi (ကျွန်း၏တောင်ဘက်) မှအိမ်နီးချင်း Cabrera သို့လေ့လာရေးခရီးအတွက်သင်ငွေပေးချေသည်။
မိုးရွာမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနွေရာသီမှာများသောအားဖြင့်မိုးရွာတတ်တယ်။ ... အကယ်၍ သင်သည်ကမ်းခြေရှိမြို့တစ်မြို့သို့သွားလျှင်၊ ခြင်ဆေးခွေကိုယူပါ၊ ၎င်းသည်လက်ကောက်သို့မဟုတ်ခရင်မ်ဖြစ်ပါကမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။
နွေရာသီမှာ, ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၂၃-၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ ပူတယ် သြဂုတ်လတွင် ၃၀ ံစင်တီဂရိတ်သို့ရောက်ရန်ရက်ပေါင်းများစွာကျော်သွားသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ညတွင်အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မကျပါ။ သြဂုတ်လကုန်ခါနီးမှအပသင်မိုးရွာမည်မဟုတ်။
ဒီရက်စွဲများပတ်ပတ်လည် ဒစ္စကိုနှင့်ကလပ်များအားသာချက်ယူအများအပြားဂုဏ်ပြုသောအခါ fiestas။ သူတို့၏နေ့ရက်များကိုစတိုင်လ်ဖြင့်ဆင်နွှဲသောမြို့များစွာလည်းရှိသည်။ ဥပမာ - Llubí (သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် Sant Feliu ၏မြို့များ)၊ Banyalbufar (နှင့်၎င်း၏ Banyalbujazz၊ ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လအတွင်း) သို့မဟုတ် Santa Eugenia ၏နာယကသူတော်စင်တို့၏ပွဲတော်များဖြစ်သည်။ 1 သြဂုတ်လ) ။
ကျွန်း၏အလုပ်အကိုင်မြင့်မားသည်, အချို့အချက်များအတွက်အလွန်အကျွံ, ဒါကြောင့်သင်ကနွေရာသီပါတီများသို့မဟုတ်ကမ်းခြေ, ဒါမှမဟုတ် surfing အဖြစ်ရေအားကစားအကြောင်းကိုအသည်းအသန်လျှင်သင်ဤရက်စွဲများတွင်လာရန်သာအကြံပြုပါသည်။
အောက်တိုဘာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှ“ ဒုတိယနွေ ဦး” ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ပျှမ်းမျှ ၁၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသည့်အပူချိန်သည်နောက်တဖန်မွေ့လျော်ပြီးအလွန်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံပူနေဆဲဖြစ်သော်လည်းရာသီဥတုသည်တဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ငါ့အတွက်မိုးများရောက်ရှိခြင်းသည်ရာသီအဆုံးကိုအဆုံးသတ်စေသောအမှတ်အသားဖြစ်သည် (အဖြစ်မှန်မှာဘာလာရီရီကျွန်းစုအစိုးရ၏အထွေထွေခရီးသွားလုပ်ငန်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ ဤအမှတ်အသားကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် နှစ် ဦး စလုံးများသောအားဖြင့်တိုက်ဆိုင်) ။
အများဆုံးအကျိုးပြုရာသီဥတုဖြစ်ခြင်း, လူတွေပါတီများနှင့်အတူတက်ရွှင်လန်း။ အောက်တိုဘာလ၏ပထမတစ်ဝက်သည် ၁၅၄၆ ခုနှစ်မှစ၍ လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းလူးကမ့်ရာလူမျိုးများကိုဂုဏ်ပြုကြသည်။ Saladina အနုပညာပွဲတော်ကို Can Picafort တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သောဤမြို့၏နံရံများပေါ်တွင်အမှတ်အသားထားခဲ့သည့်ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်များကိုအတူတကွစုရုံးစေသည်။
Serra de Tramuntana // Image - Wikimedia / Antoni sureda
ဒါကြောင့်မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာငါတို့ဒီဇင်ဘာ - ဇန်နဝါရီအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ဆောင်းရာသီဖြစ်သော်လည်း Majorcan ဆောင်းသည်နူးညံ့။ သာယာသည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၁၀ မှ ၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်, အမြင့်ဆုံး20ºCနှင့်နိမ့်ဆုံး4withC နှင့်အတူ (0 အချို့သောဒေသများရှိဇန်နဝါရီ / ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက် -4 reachingC သို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း) XNUMX belowC မှနိမ့်ဆုံးနှင့်အတူ။
ဤရက်သတ္တပတ်များအတွင်း သငျသညျအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်Sierra de Tramuntana nevada ကိုစက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်း၏အနောက်မြောက်မြောက်inရိယာတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျဆင်းခြင်းအနည်းငယ်ဖြစ်ခြင်းသည်ကုတ်အင်္ကျီများ၊ မိုးကာအင်္ကျီများနှင့် / သို့မဟုတ်ထီးများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းရာသီတွင် Mallorca တွင်လုပ်ဆောင်ရန်
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း မည်သည့်လ Mallorca သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စုံလင်သည်။ သင်လုပ်ချင်သောအရာပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုရွေးခြင်းသည်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရာသီဥတုကတကယ်တော့အတားအဆီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာသင်လန်ဒန်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်မင်းအတွက်အချိန်အများကြီးရှိမှာသေချာတယ်😉 ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ရိုးသားတဲ့အမြင်ကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီမှာနေစေချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ဖတ်ပါ။
Mallorca ကိုဘယ်အချိန်သွားရမလဲ? ကျနော့်အမြင်
Esorles, Mallorca တစ်မြို့။ // Image - Wikimedia / Rosa-Maria Rinkl
ဤကျွန်းသည်လှပသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်ဖျော်ဖြေမှုပေးထားသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြို့များသည်သူတို့၏ပွဲတော်များကိုကျင်းပကြပြီး၊ မရသောအခါ၊ သင်သည်မြို့၏ရပ်ကွက်ဟောင်းနှင့်မြို့များသို့အမြဲတမ်းသွားရောက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အားကစားလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက် Es Cruce de Manacor၊ Port d'Andratx ရှိ El Verico သို့မဟုတ် Bar Estarellas de Ses Salines စသည့်စားသောက်ဆိုင်များစွာတွင် (အိမ်ငှားရသောအစားအစာများကိုမြည်းစမ်းခြင်းအားရပ်တန့်ပါ (၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ စားသောက်ဆိုင်သင့်တော်သည်) မင်္ဂလာပါ
သို့သော်ကျွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ပြောသောစကားမှန်သည်။ အမည်၊ နွေရာသီတွင်အလွန်ပြည့်နှက်နေခြင်း မှလွဲ၍ အလွန်ဆိုးရွားသည့်ပုံရိပ်များရှိသည်။ ထိုမြို့များသည်လိုချင်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲအရက်မူးပြီးအခြားနည်းနည်းသာသောက်သုံးကြသူများမှပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုသည်ဒေသန္တရအစိုးရအနေဖြင့်ရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အလွန်လေးနက်သောပြproblemနာဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်ချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ ecotax (သို့) နေထိုင်သူများနှင့် visitors ည့်သည်များအားလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ထိုမြို့များရှိတပ်များ (ရဲများ) တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်၊ ငါပြwantနာတွေမလိုချင်ဘူး၊ မင်းလိုချင်တာကမမေ့နိုင်တဲ့အားလပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလျှင်၊ နွေ ဦး၊ ဆောင်း ဦး သို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီသို့လာရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ နွေရာသီတွင်သင်သည်လည်းပျော်ရွင်နိုင်သည်၊ သို့သော်တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်းမြို့များ၊ မြောက်ဘက်တွင်သာမက Sierra de Tramuntana နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပျော်မွေ့နိုင်သည်။
အားလုံးခြုံငုံပြောရရင်မင်းကိုအရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုပဲလိုချင်ပါတယ် can ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » ဘယ်အချိန်မှာ Mallorca ကိုသွားပိုကောင်းသလဲ